Madaxweyne Sh. Shariif oo ku dhawaaqay in 5-ta February loo aqoonsanayo maalinta Fanka iyo Fannaanka Soomaaliyeed | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweyne Sh. Shariif oo ku dhawaaqay in 5-ta February loo aqoonsanayo maalinta...
Madaxweyne Sh. Shariif oo ku dhawaaqay in 5-ta February loo aqoonsanayo maalinta Fanka iyo Fannaanka Soomaaliyeed
Muqdisho-(Berberanews)- Madaxweynaha dawladda Ku-meel-gaadhka ah ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay in maanta oo kale 5-ta bisha Febraayo loo aqoonsado maalinta Fanka iyo Fannaanka Soomaaliyeed, isla markaana sannad kasta maanta oo kale la xusi doono.
Madaxweyne Shariif oo Maanta ka qaybgalay kulan lagaga hadlayay soo nooleynta iyo kobcinta Fanka Soomaaliyeed, kaasoo ay soo qaban-qaabisay Hay’adda Wada-tashiga iyo Cilmi-baadhista CRD, sheegay inay dawladdiisu mudnaanta koowaad siinayso horumarinta Fanka iyo Fannaanka, isla markaana daryeeli doonto Fannaaniinta xaaladaha adagi la soo darsaan, sidoo kalena dhakhso loo dhisi doono Tiyaatarkii Qaranka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho.
Kulankaas oo ay Madaxweynaha ka sokow ka qaybgaleen, Wasiirka Warfaafinta, Wasiir-u-dowladaha arrimaha gudaha, Taliyaha Booliska, Xildhibaanno, Saraakiil Ciidan, Madaxa xarunta CRD, Masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda, Abwaaniin, 140 xubnood oo Fannaaniinta Hobollada kala duwan ee ka jira Muqdisho ka tirsan iyo qaybaha Bulshada.
Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay in kulanku yahay mid taariikhi ah, isla markaana waxa uu xusay inay dhibaato fara badan oo soo taxnayd tan iyo burburkii dawladda Soomaaliya 1990-kii, taasoo ay badi bulshada Soomaaliyeed kala sinnaayeen. “Shaki kuma jiro Qaranka meel aad iyo aad u weyn inaad kaga taalliin haddii aad tihiin fanka iyo Fannaanka suubban, xaaladda dhibka ah ee lasoo maray iyo daruufihii jiray waa uga tacsiyadeynayaa, cid kasta oo gacan ka geysata soo nooleynta Fankana waan uga mahad-celinayaa sida CRD. Runtii Soomaaliya Fanka horumar aad u weyn ayuu kusoo kordhiyay. Maanta waxaan dhihi lahaa waa inaad igu waafaqdaan in laga dhigo maalinta la xuso Fanka iyo Fannaanka Soomaaliyeed, 5-bisha Febraayo ee soo socotana aan u dabbaal-degno.” Sidaa ayuu yidhi Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa ballan-qaaday inay adkeyn doonaan horumarinta Fanka iyo Fannaaniinta Soomaaliyeed, isagoo caddeeyay in dowladda Ku-meel-gaadhka ah ee Soomaaliya u taagan tahay sidii ay gacan uga geysan lahayd soo nooleynta Fanka, isaga oo xusay inay door muhiim ah siin doonaan taageerada Fannaaniinta.
Sheekh Shariif oo ka hadlaya ballan-qaad Fannaaniinta ay dawladdu hore ugu samaysay iyo xaaladda Fannaanka Cabdi Tahliil Warsame oo lagu dhaawacay dhawaan Muqdisho, waxaanu yidhi Madaxweynuhu; “Ballan-qaadkii loo sameeyay Fannaaniinta Soomaaliyeed waa la meel marin doonaa, waxaanan idiin caddeynayaa in horumarinta Fanka iyo Fannaaniinta aan u taagannahay, ballan-qaadkii hore u dhacay waa daba-taagannahay. Saaka ayaa ugu dambeysay Wasiirka Warfaafinta waxaan ka wareystay arrintii Fannaan Cabdi Tahliil meesha uu marinayo, sidoo kale arrinta Tiyaatarka, waxaan rejeynayaa dhowr bilood ka dib in Tiyaatarka uu diyaar ahaado, waliba inteenna inuu naga badan doono.”
Madaxweyne Shariif ayaa sidoo kale si gaar ah u xusay in Wasaaradda Warfaafintu ka nasiib badan tahay Wasaaradaha kale, isagoo soo hadal-qaaday Wasiirradii hore u soo maray, inay kala nasiib fiicnaayeen, waxaanu sheegay in Wasiirkii hore uu kiciyay Radio Muqdisho, kii ku xigayna uu Telefishinka kiciyay, isagoo Wasiirka hadda xilka hayana ka dalbady inuu dib u dhiso Tiyaatarkii Qaranka Soomaaliyeed ee Caasimadda Muqdisho.
Waxa kale, oo munaasibaddaa ka hadlay Wasiirro, Saraakiisha Ciidammada, Abwaanno iyo Aqoonyahanno, kuwaasoo dhammaantood iftiimiyey muhiimadda Fanka iyo sida Fanka iyo Fannaanka Soomaaliyeed ugu baahan yahay dib-u-dhis baaxad le iyo kobcin aan laga daalin.
Previous articleGuurtida iyo Wakiillada Somaliland oo maanta ansixiyey inay Xukuumaddu ka qaybgasho Shirka London iyo Wax ka beddal lagu sameeyey Xeer Xakamaynayey
Next articleSuxufiyad ka mid ah ardaydii Reer Somaliland ee Waxbarashada u tegay Turkiga oo xogwaran ka bixisay arday u tahriibay dalalka Yurub iyo kuwo dib loogu soo celiyay Somalia